WHO - Waayeelka oo caalamka ku soo badanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
WHO - Waayeelka oo caalamka ku soo badanaya Foto: Anja Niedringhaus/TT.
WHO - Waayeelka oo caalamka ku soo badanaya
Publicerat torsdag 6 november 2014 kl 14.00
Waddammada soo koreya ayey culeeys ballaaran ku hayaan hayadahooda caafimaad iyo miisaaniyadda la geliyo kor u kaca waayeelka oo caalamka ku soo badanay, sida ay qortay laanta caalamiga ee howlaha caafimaadka WHO oo ka tir-san ururka caalamiha ah ee Qarammada Midoobey.
Markii ugu horreeysay ayuu caalamku yeelan doonaa sannadka 2020 in aqlabiyad bulshada caalamku noqoto dadyoow da'doodga ey da'doodu gaarsiisan yihiin 60 jir, kolka loo barbar dhigo da'da shan jirka ka hooseeya.
Laanta caafimaadka ee WHO ayaa sheegtay in loo baahan yahay is-bedello lagu sameeyo dhanka hayadaha caafimaadka iyo xannaanada si loo buuxiyo baahida waayeelka caalamka ku soo badanaya. Da'da raagta kuma xirna oo keliya caafimaadka.